Global Voices teny Malagasy » Mety ho voaheloka ho faty noho ny “fanevatevana ny Mpaminany” ilay mpandrindra fantsona Telegram iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Mety ho voaheloka ho faty noho ny “fanevatevana ny Mpaminany” ilay mpandrindra fantsona Telegram iray
Voadika ny 15 Jona 2018 4:47 GMT 1	 · Mpanoratra Center for Human Rights in Iran Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona
Reraka noho ny fitokonany tsy nihinan-kanina, nafindra tany amin'ny hopitaly niaraka tamin'ny rojovy tamn'ny tanana sy ny tongotra ilay voafonja noho ny fanehoan-kevitra, Hamidreza Amini, saingy naverina nigadra raha mbola tsy vita ny fitsaboana azy. Sary nozaraina niaraka tamin'ny CHRI ary nahazoana alàlana.
Dika nasiam-panovana tamin'ny lahatsoratra iray nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny Foibe ho an'ny Zon'Olombelona tao Iran  ity manaraka ity.
Mety hiatrika fanamelohana ho faty i Hamidreza Amini raha toa ka meloka amin'ny “fanevatevana ny Mpaminany” tao amin'ny votoatin'ny fantsony fampiasa Telegram, hoy ny loharanom-baovao iray akaikin'ity voafonja noho ny fanehoan-kevitra ity raha nilaza tamin'ny Foiben'ny Zon'Olombelona ao Iran (CHRI) tamin'ny 5 Jona 2018 .
Hotsaraina amin'ny 25 Jona 2018 i Amini, noho ny fiampangana “fanevatevana ny mpaminany”, “fanevatevana ny mpitarika faratampony”, “famelezana ny fiarovam-pirenena”, “fanentanana manohitra ny fanjakana” ary “fanakorontanana ny hevi-bahoaka” hoy ny loharanom-baovao iray nangataka ny tsy hitonona anarana noho ny mahasaropady ny raharaha ao Iran manodidina ny firesahana amin'ny fampitam-baovao vahiny.
Mpanamboatra finday 47 taona i Amini ary nosamborin'ny Fikambanan'ny Mpanao Fanadihadiana ao amin'ny Mpiambina Revolisionera Islamika (IRGC) tao Teheran izy tamin'ny 2 Desambra 2017, noho ny nataony tao amin'ny fantsona Telegram, izay notantanany tamin'ny solon'anarana hoe, “Ariyobarzan. “
Araka ny loharanom-baovao izay niresaka tamin'ny CHRI,
Hamidreza had created a Telegram channel where anyone could post her/his views, the IRGC held him responsible for everything others had written and when he told the investigator that he did not write those things, he was told that his channel and related groups had been shut down and therefore the IRGC could accuse him of anything they want.
Namorona fantsona Telegram izay ahafahan'ny olona rehetra mandefa ny heviny i Hamidreza. Nitazona azy ho tompon'andraikitra tamin'ny zavatra rehetra izay nosoratan'ireo olona ny IRGC ary rehefa nilaza tamin'ny mpanadihady izy fa tsy nanoratra ireny zavatra ireny dia nolazaina fa nakatona ny fantsony sy ny vondrona mifandray tamin'izany ary afaka miampanga azy amin'izay tiany ny IRGC noho izany.
“Voalohany indrindra, afaka maneho ny fomba fijeriny malalaka ny olona rehetra ary toy izany no nataon'i Hamidreza sy ny olona tao amin'ny vondrona misy azy,” hoy ny loharanom-baovao. “Saingy ny ankamaroan'ny zavatra niampangana azy, anisan'izany ny ‘faniratsirana ny mpaminany’, dia nosoratan'ny olon-kafa … Voampanga noho ny nataon'ny olona miisa 3.000 izy.”
Milaza ny andininy faha-262  amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Islamika fa:
Anyone who swears at or commits qazf [slander] against the Great Prophet [of Islam] (peace be upon him) or any of the Great Prophets, shall be considered as Sāb ul-nabi [a person who swears at the Prophet], and shall be sentenced to the death penalty.
Na iza na iza mianiana na manao qazf [fanendrikendrehana] manohitra ny Mpaminany Lehiben’ [ny finoana Islamo] (fiadanana ho azy) na ny iray amin'ireo Mpaminany lehibe, dia heverina ho Sāb ul-nabi [olona iray mianiana amin'ny Mpaminany], ary homelohina ho faty.
Taorian'ny fisamborana azy, nogadraina tao amin'ny toerana mitokana i Amini tao amin'ny fonjan'i Evin Efitra 2-A, izay nanaovana fanadihadiana azy tsy nisy mpisolovava.
Tamin'ny faran'ny volana Febroary 2018, nafindra tany amin'ny Fonja Lehibe tany Teheran tao Fashafouyeh izy, 32 kilaometatra any atsimon'i Teheran, tsy nisy alàlana avy any amin'ny fitsarana. Na izany aza, naverina tany amin'ny fonjan'i Evin izy tamin'ny 3 Jona rehefa avy nitokona tsy nihinan-kanina mba hanoherana ny raharahany, araka ny loharanom-baovao.
Nilaza hatrany ny loharanom-baovao fa nampidirina hopitaly i Amini noho ny vokatry ny fitokonana tsy nihinan-kanina saingy naverina nafindra tany am-ponja raha mbola tsy vita ny fitsaboana azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/15/121244/
 Foibe ho an'ny Zon'Olombelona tao Iran: https://www.iranhumanrights.org/2018/06/telegram-channel-admin-could-get-death-penalty-for-insulting-the-prophet/
 andininy faha-262: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000455-english-translation-of-books-1-and-2-of-the-new-islamic-penal-code.html#47